Midowga Maxkamadaha oo ay ku haboon tahay iney xilka ay hayaan ku wareejiyaan maamulka gobolka Banaadir.
Buluugleey, April 5, 2006
Maxkamadaha Islaamka ayaa waxaa la dhisay 1994 si ay magaalada Muqdisho ugu abuuraan hanaanka garsoorka si ay uga hortagaan dembiyada burcada hubeysan. Waxaana soo shaac bixiyey oo taageero dhaqale siiyey dadweynaha degen Muqdisho iyo ganacsatada waaweyn.
Ujeedada loo abuuray waxaa ugu weyneyd iney sameeyaan maxkamado xakameeya dembiyada ay geysanayaan maleeshiyooyinka ku dhisan hab beeleedka.
Midowga Maxkamadaha ayaa abuurmay, waxeyna maxkamaduhu iska fogeeyeen dhaqankii beelaha oo ay ku tiirsanayeen iyagoo goono isugu taagey isbaheysi diimeed, kaas oo salka ku haya siyaasad ku dhisan wadaadnimo.
Dagaalkii ay maxkamaduhu dhawaan la galeen dagaaloogayaasha Muqdisho ayaa maxkamaduhu waxey ku heleen taageero balaaran oo ay dadweynaha Muqdisho ku dhinac safteen. Arrintaas waxey kicisay kahsi loo qaaday wadaadada, kaas oo inta badan eed balaaran loogu soo jeediyey qabiilka ugu weyn beelaha dega koofurta Muqdisho.
Dagaalka Muqdisho ayaa la qorsheeyey in bartilmaameed looga dhigto hal beel oo lagu duulo, si taas ay meesha uga saarto xulafeysiga diinta, dagaalkana lagu soo koobo inuu u dhexeeyo beel ka soo horjeeda siyaasada dagaaloogayaasha.
Dagaaloogayaasha Muqdisho ayaa bilaabay iney dib ugu guryonoqdaan beelahooda si ay uga helaan taageero ay u adeegsadaan iney culaab ku saaraan beesha ay dagaalsan yihiin. Qeylo dhaanta dagaaloogayaasha waxaa ku soo baxay dalal wata dano cadowtinimo oo raadinaya fursad ama ay ku xoojiyaan dowlada Col. C\_llahi ama doonaya iney ku burburiyaan xoogaga diimaha taageersan.
Mar haddiiba la doortay maamulka gobolka iyo madaxdooda waxaa lagama maarmaana in midowga maxkamaduhu ay awoodooda ku wareejiyaan madaxda gobolka Banaadir oo ay masuuliyad ka saran tahay amaanka iyo garsoorka dadweynaha degan Muqdisho.
Xilwareejintaas ayaa u muuqaneysa guul weyn oo badbaadin karta danaha siyaasadeed oo ay ka mideysan yihiin dadweynaha reer Muqdishu, taas oo ay uga soo horjeedaan Itoobiya. Haddii aysan la iman wadaadadu tanaasulkaas waxey dagaaloogayaasha Muqdisho ay badayaan iney qoorta u dhiibtaan Itoobiya ama siyaasada Col. C\_llahi oo labaduba ka mideysan in dowladnimada Soomaaliya laga ilaaliyo shaqsiyaadka ka soo jeeda degaanada bartamaha ilaa Banaadir. Intii dagaaloogayaasha loo adeegsan lahaa danaha Itoobiya iyo tan Col. C\_llahi waxaa ka haboon in loo daayo goonida ay u taagan yihiin iyo madaxtinimada ay ku haystaan degaanada ay isku heystaan iney ka taliyaan.